Dabka TV Stick si aad u qulqusho sida Chromecast | Androidsis
Manuel Ramirez | | Aaladaha Android, Qalabka kale
Sannadkii hore Google ayaa bilaabay Chromecast, oo ah sharad ay ku yeelan karto ciyaaro dhammaan waxyaabaha ku jira warbaahinta badan in isticmaale uu ku haysto qalabkooda. Qori fudud oo ku xiran shaashadda TV-ga waxaan ku heli karnaa qadar weyn oo ah taxanaha telefishanka, filimaan, maqal ama waxyaabo kale.
Dhinaca kale, Amazon, waxay ka Daahfurey TV-ga Dabka Mareykanka, oo ah astaamo leh astaamo iyo karti ka badan kuwa Google. In kasta oo ay u muuqato in macnahaas aan u joogno ka hor tartan u dhexeeya labada shirkadood, maanta Amazon waxay soo bandhigeysaa dongle-ka HDMI ee loogu talagalay qulqulka ka kooban waxyaabo badan oo warbaahin ah oo wata Fire TV Stick. Waa inaad tirisaa in Google uu dhawaan bilaabay barnaamijkiisa oo uu weheliyo Fire TV $ 99. Marka alaabtan ayaa u beddeleysa telefishankeenna cimriga ah wax ka sii badan, waxay noqoneysaa mid xiiso leh.
1 Usha ka awood badan
3 Ikhtiyaarka kale waa Google Chromecast
Usha ka awood badan
Sida FireTV oo kale, Amazon waxay rabtaa isticmaalaha inuu yeesho wax soo saar aad u xoog badan marka uu Fire TV Stick gacanta ku jiro. Awood badan waxay ka dhigan tahay inay leedahay a processor laba-geesood ah, 1 GB oo RAM ah iyo xasuus gudaha ah 8 GB. Marka la soo koobo, taas oo dhab ahaan ah laba jeer xusuusta RAM ee uu Chromecast haysto iyo afar jeer kaydinta gudaha.
Fire TV Stick waa isku dayga ay Amazon kula tartameyso Chromecast laakiin waxay siineysaa wax intaas ka badan tan. Bixinta Amazon maraa iyada oo leh adeegsigeeda adeegsigiisa iyo awooda kaydinta barnaamijyada. Marka laga reebo inay sidoo kale leedahay waxqabadka muraayadda si looga sameeyo kiniiniga Dabka, taleefanka dabka ama qalab leh Miracast firfircoonaan.
Waxay sidoo kale kaga duwan tahay Chromecast adigoo leh kantaroolka fog, si aysan isticmaaleyaashu ula socon taleefannadooda ama kumbuyuutarradooda si ay u koontaroolaan waxa ka socda shaashadda. Sikastaba, barnaamijka u gaarka ah ushaan ayaa sidoo kale la heli doonaa.
Waqtigan xaadirka ah waxaa loo heli doonaa Boos celintaada $ 39.99In kasta oo dadka isticmaala Amazon Premium awoodi doonaan inay iibsadaan midkood labada maalmood ee soo socota qiimaha badhkood $ 19.99. Ma garanayno goorta laga heli doono caalamka oo ay bilaabi doonto inay la xiriirto dadka isticmaala Nofeembar 19.
Ikhtiyaarka kale waa Google Chromecast
Chromecast wuxuu u yimid sidii qalab warbaahin qulqulaya oo ku xirmaya dekedda HDMI ee TV-ga. Ka soo qaad kiniin ama taleefan casri ah nuxurka waa la daadin karaa oo codsiyada si toos ah ugu dir shaashadda TV-ga.
Bilowgii bilawgeeda, ma aysan haysan barnaamijyo badan oo la heli karo, laakiin maanta way sii kordhayeen taas oo kuu ogolaaneysa inaad si firfircoon uga shaqeyso qalabkan xiisaha badan. Mid ka mid ah barnaamijyada sida YouTube-ka ayaa la rakibay, taleefanka wuxuu kuxiranyahay shabakada Wi-Fi ee Chromecast ay kuxirantahay, YouTube-ka ayaa furmaya oo riixaya badhanka dirida fiidiyowga ayuu ciyaarayaa. Qiimaha Chromecast waa € 35 waxaana laga heli karaa Google Play.
Ps: waad ogtahay sida loo rakibo Google Play on Fire TV Stick?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Amazon waxay soo bandhigaysaa Fire TV Stick, oo ah tartame Chromecast
War aad u fiican, waan ku daalanayay Chromecast. Waxaan rajeyneynaa in badeecadan Amazon ay u shaqeyso si isku mid ah ama ka sii wanaagsan.
Jawaab Luis Alberto
Booliisku wuxuu cayrsanayaa Pako, ciyaar fudud, balwad leh iyo madadaalo u ah Android
Khaaska ah Halloween: Cirfiidka cirfiidka